Chartering gị onwe gị ụgbọelu a na-ewere a okomoko nke ọtụtụ. Otú ọ dị, enwere uru nke a turboprop ugboelu n'akwụkwọ iwu nke nwere ike na-ezu mfe karịa na-eri nke okomoko. The isi rite uru dị mma, na ya na mma na-abịa n'ọtụtụ ụzọ. Nnukwu mma bụ na ị pụrụ izere ndị TSA na-ezere bumping gị elbows ndị ala ọzọ na ndị mgbe ọha ọdụ ụgbọelu. Douglas Adams kwuru ozugbo na ọ dịghị ihe dị ka jọrọ njọ n'ụwa dị ka a ọha ọdụ. O nwere otu isi. Ebe ọ bụ na a kwụrụ ụgwọ ụgbọelu nwere ike banyere on a dị nta ọdụ ụgbọelu, i nwere ike iji zere omenala edoghi, TSA, na ndị ọzọ na hassles nke ọha efe efe.
Uru ọzọ a turboprop ugboelu n'akwụkwọ iwu bụ na ị pụrụ n'ezie na-arụ ọrụ mgbe ejegharị ejegharị. On ikuku, na a dị nta ụgbọelu, n'oche gị oke, ị nwere ike mfe na-arụ ọrụ na gị na laptọọpụ ma ọ bụ ekwentị. Ọ bụrụ na ị na-aga-eme ka a ngosi mgbe ọdịda, ma ọ bụ izute ụfọdụ azụmahịa mmekọ, i nwere ike ịkwadebe maka ngosi ma ọ bụ nzukọ na-eme njem. Kasị ụgbọ elu nwere njikọ Ịntanetị, phones, faxes na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na-eme ka ọ fọrọ nke nta a nke abụọ ụlọ ọrụ.
Ndị ọzọ isi uru nke chartering gị onwe gị na ugboelu na-nzuzo na confidentiality. On a kwụrụ ụgwọ ụgbọelu, ị na-enwe nsogbu banyere onye na-achọ gị ubu na gị na laptọọpụ na ihuenyo. Ọ bụrụ na ị kwụrụ ụgwọ ụgbọelu onwe gị, ị nọ n'ụlọ nnwere onwe na-agba gị onwe gị na ngalaba-njem. Ọ bụrụ na ụgbọelu na-goro site gị ụlọ ọrụ, gị ngalaba-njem ga-gị onwe gị na ndị ọrụ ibe, dabere na-deputed site na ụlọ ọrụ na-eme njem na ị.
-Agba bụ ọzọ isi uru nke chartering gị onwe gị ụgbọelu. Ebe ọ bụ na kwụrụ ụgwọ ụgbọ elu mkpa a nta runway, e nwere ọtụtụ ihe nhọrọ nke ọdụ ụgbọelu na ha nwere ike iji. Nke a pụtara na ị nwere ike belata gị njem oge na si n'ọdụ ụgbọ elu. mgbe ahụ, Ozugbo ị bụ na ọdụ ụgbọ, ị na-azọpụta oge na omenala kwụ n'ahịrị kwa. n'ozuzu, anyị na-ahụ uru nke turboprop ugboelu ichata-eme ka ọ karịrị nnọọ a okomoko.
eze Air 350
eze Air 300
Eze Air B200
eze Air 200
eze Air 100
Cessna ghaghị imeri
eze Air 90